» आफ्नैवाट भएको घात प्रतिघातमा नेता र नेतृत्व रमाउन सक्लान ?
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०७:०५
भविस्य कसैले देखेको हुदैन,गर्भको कुरा थाहा हुदैन भने जस्तै हो चुनाव, गरेको कामको मुल्यांकन गर्दै जित्न पर्ने पनि हो चुनाव, मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा राजधानी वन्यो, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वन्यो, हेटौडा हरावरा भयो, मकवानपुरका सबै ठाउमा २० वर्षमा नभएको विकाश भयो, सवै जनप्रतिनिधीहरु स्वच्छ छवीका कायम रहे कसैलाई दाग लागेन त्यसैले ती पार्टीवाट उठेकाहरुले पुन चुनीन पर्ने पनि हो चुनाव ।
जितेर मात्तिने र हारेर आत्तिने अनि आशक्ती पालेर राजनिती गरेकाहरुमा चुनावताका स्वार्थ पुरा नभएपछी विचलन आउनुत स्वभावीक नै हो तर अहीले केही ठाउमा जितेको छ तर् मन अमिलो छ गयर बधाई दिन अबिर र खादा लगाउन मन छ तर आफ्नैवाट भएको घात प्रतिघातवाट हारेकाहरुको अनुहार झलझली अगाडी आईरहेको छ ।
नेता र नेतृत्व घात प्रतिघातमा रमाउन सक्लान ? बानी परेको हुनसक्छन तर म जस्ता कार्यकर्ता मर्महात भएका छन । यतिठुलो अवसर हुदाहुदै पनि थोरै जितेको छ भन्ने आभाष भएको छैन । आफुसगै हिड्ने साथीहरु, नेताहरु, आन्दोलनको योद्धाहरु हार्दा मन दुखि छ । मैले प्रत्यक्ष देखे सुनेका यी तस्विरहरु पटक पटक मानसपटलमा नाचि रहेका छन । सायद मैले नेताहरुलाई भनेको कुरालाई गम्भिर भएर केही गर्न पाएको भए, यो दुस्परिणाम भोग्न पर्दैनथियो की भन्ने कुराले मन छटपटिएको छ ।
जित र हार सामान्य भएपनि मार्कस्वाद नपढेका र लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अनि जनवादी केन्द्रियता नवुझेका आफ्नाहरुकै कारणले हार्दा, संगै सुतेकाहरुले निदाय पछी राती खुकुरीले काटेजस्तो गरी काट्ने कुराले असहय हुने रहेछ । यो परम्पराले धेरैको मन भाचिन्छ टुट्छ फुट्छ त्यसैले यो परम्परालाई वन्द गरौ ।
पार्टी निर्णयलाई मान्ने वानी वसालौ । सवैमा ईमान्दारीताको विकाश गरौ । अन्यथा भाई फुटेर गाउ सबै अर्कोले लुट्नेछ । लुटीसकेको गाउ फिर्ता लिन गार्हो पर्छ । भलि आफुले गाउखोज्दा पनि त्यही अवस्था हुन्छ ।
र अन्तमा विजयी हुनुभएका सबैलाई वधाई सफल कार्यकालको अग्रिम शुभकामना । आफ्नाहरुको घातवाट हारेका सबैले धैर्य गरौ रातपछी दिन आउछ, हरेक दिन विहान अवस्य सुर्योदय हुन्छ । जेभयो निर्मम तरिकाले समिक्षा गरौ, नेपाल र नेपाली जनताको भोलिको सुन्दर सपना साकार पार्न लागि परौ ‘‘
नेकपा (एमाले) मकवानपुर जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख